“Tichaenda Nemi”—Zekariya 8:23 | Yokudzidza
SARUDZA MUTAURO Acholi Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Batak (Karo) Batak (Toba) Bengali Bicol Bulgarian Catalan Cebuano ChiTetun Dili Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chuvash Croatian Czech Danish Dutch Estonian Fijian Finnish French Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Ibanag Icelandic Iloko Indonesian Italian Japanese Javanese Kannada Kikamba Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Lamba Latvian Lhukonzo Lithuanian Luganda Luo Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Marathi Maya Mixe Mongolian Moore Mutauro Wemasaini wechiChinese Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuAngola Mutauro Wemasaini wokuArgentina Mutauro Wemasaini wokuAustralia Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuBritain Mutauro Wemasaini wokuChile Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuEcuador Mutauro Wemasaini wokuFinland Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuJapan Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuPeru Mutauro Wemasaini wokuPoland Mutauro Wemasaini wokuRussia Mutauro Wemasaini wokuVenezuela Ndau Ndebele (Zimbabwe) Nepali Ngangela Nias Norwegian Nyungwe Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Runyankore Russian Samoan Sango Sena Serbian Serbian (Roman) Shona Sidama Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tok Pisin Tshwa Turkish Turkmen Tuvaluan Tzotzil Ukrainian Urdu Uzbek Vietnamese Waray-Waray Wolaita Zande Zapotec (Isthmus)
“Tichaenda nemi, nokuti takanzwa kuti Mwari anemi.”—ZEK. 8:23.
NZIYO: 65, 122
Mashoko ari pana Zekariya 8:23 ari kuzadziswa sei?
Vakazodzwa vanofanira kuona sei kuzodzwa kwavo?—1 VaK. 4:6-8.
Nei tisingafaniri kunetseka nenhamba yevanodya chingwa nekunwa waini paChirangaridzo?—VaR. 9:11, 16.
1, 2. (a) Jehovha akati chii chaizoitika munguva yedu? (b) Mibvunzo ipi ichapindurwa munyaya ino? (Ona mufananidzo uri panotangira nyaya ino.)
JEHOVHA akataura zvaizoitika panguva yatiri kurarama achiti: “Mumazuva iwayo varume gumi vanobva mumitauro yose yemarudzi vachabata, chokwadi vachabata kumupendero wenguo yomuJudha, vachiti: ‘Tichaenda nemi, nokuti takanzwa kuti Mwari anemi.’” (Zek. 8:23) Varume gumi vanotaurwa muuprofita uhwu vanomiririra vanhu vane tariro yekurarama panyika, avo vari kubata “kumupendero wenguo yomuJudha.” Vanofara chaizvo nokushanda pamwe chete nevaKristu vakazodzwa nemudzimu, avo vanonziwo “Israeri waMwari,” uye vanoziva kuti Jehovha ari kukomborera vakazodzwa ivavo.—VaG. 6:16.
2 Jesu akataurawo pfungwa yakafanana neyakataurwa nemuprofita Zekariya panyaya yekubatana kwevanhu vaMwari. Akataura kuti vateveri vake vari mumapoka maviri, “boka duku” uye “mamwe makwai.” Asi akati vaizova “boka rimwe chete” rine “mufudzi mumwe chete.” (Ruka 12:32; Joh. 10:16) Sezvo paine mapoka maviri, vamwe vangabvunza kuti: (1) Vemamwe makwai vanofanira here kuziva mazita evaya vose vakazodzwa varipo iye zvino? (2) Vakazodzwa vanofanira kuona sei kuzodzwa kwavo? (3) Unofanira kuita sei kana mumwe munhu wemuungano yenyu akatanga kudya chingwa nekunwa waini paChirangaridzo? (4) Unofanira kunetseka here nekuwedzera kungaita nhamba yevaya vanodya chingwa nekunwa waini? Ngatimbokurukurai mibvunzo iyi.
TINOFANIRA HERE KUZIVA MAZITA EVAKAZODZWA VOSE VARIPO IYE ZVINO?
3. Nei tisingakwanisi kunyatsoziva kuti ndivanaani vachava pavanhu 144 000?
3 Vemamwe makwai vanofanira here kuziva mazita evakazodzwa vose varipo mazuva ano? Kwete. Havafaniri havo kuaziva, nokuti kana munhu asarudzwa hazvirevi kuti achatoenda kudenga. Anenge angodanwa chete. Ndokusaka Satani achishandisa “vaprofita venhema . . . kuti kana zvichibvira vatsause kunyange vakasarudzwa.” (Mat. 24:24) Hapana anoziva kana muKristu akazodzwa achizowana mubayiro wake wekuenda kudenga kana kuti kwete. Jehovha ndiye anoona kuti muKristu iyeye akakodzera here. Kana Jehovha akaona kuti munhu wacho aramba akatendeka, anomuisa chisimbiso chekupedzisira, zvichida pane imwe nguva asati afa kana kuti pane imwe nguva “kutambudzika kukuru” kusati kwatanga. (Zvak. 2:10; 7:3, 14) Saka hazvibatsiri kuti chero ani zvake ari panyika aedze kutsvaga mazita evashumiri vaMwari vachava pavanhu 144 000. 
4. Kana tisingakwanisi kuziva mazita evakazodzwa vose vari panyika, ‘tingaenda’ sei navo?
4 Saka kana zvisingakwanisiki kuziva mazita evakazodzwa vose vari panyika, vemamwe makwai ‘vangaenda’ sei navo? Ona zvinotaurwa muuprofita huri muBhuku raZekariya nezvevarume gumi. Varume ava vaizobata “mupendero wenguo yomuJudha, vachiti: ‘Tichaenda nemi, nokuti takanzwa kuti Mwari anemi.’” Kunyange zvazvo pavhesi iyi pachinzi muJudha, mashoko ekuti “nemi” uye “anemi” anoratidza kuti hapasi kutaurwa nezvemunhu mumwe chete. Saka muJudha ari kutaurwa pano anofanira kunge achimiririra vanhu vakawanda, kwete munhu mumwe chete! Vemamwe makwai havafaniri havo kuziva muKristu akazodzwa mumwe nemumwe kuti vaende naye. Asi vanofanira kuvaona seboka, vovatsigira. Magwaro haatombotikurudziri kuti titevere munhu. Jesu ndiye Mutungamiriri wedu.—Mat. 23:10.
VAKAZODZWA VANOFANIRA KUONA SEI KUZODZWA KWAVO?
5. VaKristu vakazodzwa vanofanira kufungisisa nezvei, uye nei vachifanira kudaro?
5 Vaya vanodya chingwa nekunwa waini paChirangaridzo vanofanira kufungisisa nyevero iri pana 1 VaKorinde 11:27-29. (Verenga.) Muapostora Pauro ari kurevei pano? Ari kureva kuti kana muKristu akazodzwa akadya chingwa newaini asi iye asina kutendeka kuna Jehovha, anenge achidya zvisina kukodzera. (VaH. 6:4-6; 10:26-29) Nyevero iyi inoyeuchidza vaKristu vakazodzwa kuti vanofanira kuramba vakatendeka kuti vazowana mubayiro. Vanofanira kuramba vachishanda nesimba kuti vawane “mubayiro wokudanwa kumusoro naMwari achishandisa Kristu Jesu.”—VaF. 3:13-16.
6. Vakazodzwa vanofanira kuona sei kuzodzwa kwavo?
6 Achifemerwa naMwari, Pauro akaudza vaKristu vakazodzwa kuti: “Ndinokutetererai kuti mufambe zvakakodzera kudanwa kwamakadanwa nako.” Pauro akabva ataura kuti vaizozviita ‘nepfungwa dzinozvininipisa zvakakwana nounyoro, nomwoyo murefu, vachishivirirana murudo, vachivavarira nomwoyo wose kuchengeta kubatana kwomudzimu muchisungo chorugare.’ (VaEf. 4:1-3) Mudzimu waJehovha unobatsira vashumiri vake kuti vazvininipise, kwete kuzvikudza. (VaK. 3:12) Kunyange zvazvo vachiziva kuti vakazodzwa, vaKristu ava havazvioni sekuti vane mudzimu mutsvene unopfuura wevaKristu vane tariro yekurarama panyika. Havazvioni sevanonzwisisa Bhaibheri kupfuura vamwe, uye havaiti zvinhu zvekuda kuratidza kuti vari nani pane vamwe. Havakurudziri vamwe vanhu kuti vatange kuona sokuti naivowo vakazodzwa uye kuti vanofanira kutanga kudya, asi vanozvininipisa vachiziva kuti Jehovha ndiye anosarudza.
7, 8. Zvii zvisingatarisirwi nevaKristu vakazodzwa uye nei vasingatarisiri izvozvo?
7 Kunyange zvazvo kusarudzwa kwemunhu kuti aende kudenga iri ropafadzo yakanaka chaizvo, vaKristu vakazodzwa havatarisiri kubatwa sevanhu vari pamusoro. (VaEf. 1:18, 19; verenga VaFiripi 2:2, 3.) Pakuzodzwa kwavo, mudzimu waJehovha ndiwo wakapupurirana nemumwe nemumwe wavo. Kuzodzwa kwavo hakuna kumboziviswa vanhu. Saka kana vamwe vanhu vasina chokwadi chokuti mumwe muKristu azodzwa nemudzimu mutsvene, muKristu iyeye anenge azodzwa haafaniri kunetseka nazvo. Vakazodzwa vanotoziva kuti Magwaro anonyevera vaKristu kuti vasakurumidza kubvuma kana mumwe munhu achizviti akasarudzwa naMwari. (Zvak. 2:2) Saka vaKristu vakazodzwa havatarisiri kuti vamwe vanhu vavaone sevari nani kupfuura vamwe. Kakawanda kacho havatombotauri nezvekuzodzwa kwavo nekuti vanenge vasingadi kuti vanhu vavaone sevanokosha kupfuura vamwe uyewo havazvirumbidzi nemhaka yemubayiro wavo uri mberi.—1 VaK. 1:28, 29; verenga 1 VaKorinde 4:6-8.
8 Uyewo vaKristu vakazodzwa havazvioni sevari pamusoro pevamwe vanhu vose. Havangoshamwaridzani nevamwe vakazodzwa chete, kuitira kuti vakurukure nezvekuzodzwa kwavo uye havaiti tumapoka kuti vadzidze Bhaibheri vari voga. (VaG. 1:15-17) Kana vakaita izvi ungano inopedzisira isisina kubatana uye izvozvo zvinopesana nemudzimu mutsvene uyo unoita kuti pave nerugare uye kubatana.—Verenga VaRoma 16:17, 18.
UNOFANIRA KUVAONA SEI?
9. Nei uchifanira kungwarira mabatiro aunoita vanhu vanodya chingwa nekunwa waini paChirangaridzo? (Ona bhokisi rakanzi “ Rudo ‘Haruzvibati Zvisina Kufanira.’”)
9 Unofanira kuona sei munhu anodya chingwa nekunwa waini paChirangaridzo? Jesu akaudza vadzidzi vake kuti: “Imi mose muri hama.” Akabva awedzera kuti: “Munhu wose anozvikwidziridza achaninipiswa, uye munhu wose anozvininipisa achakwidziridzwa.” (Mat. 23:8-12) Saka hazvina kunaka kuti tikwidziridze munhu, kunyange kana ari hama yakazodzwa yaKristu. Richitaura nezvevakuru vechiKristu, Bhaibheri rinotiudza kuti titevedzere kutenda kwevaya vari kutitungamirira, asi hapana parinotiudza kuti tikwidziridze mumwe munhu. (VaH. 13:7) Magwaro anotiudza kuti pane vamwe “vakakodzera kukudzwa zvakapetwa kaviri.” Asi vanhu ivavo havakudzwi nokuti vakazodzwa. Vanokudzwa nokuti “vanotungamirira nenzira yakanaka” uye “vanoshanda zvakaoma pakutaura nepakudzidzisa.” (1 Tim. 5:17) Saka kana vakazodzwa vakakwidziridzwa kana kuti vakarumbidzwa zvisina kukodzera vanogona kupedzisira vasisina kusununguka. Uyewo kana vakabatwa saizvozvo zvinogona kuzovaomera kuti varambe vachizvininipisa. (VaR. 12:3) Hatingadi kuita zvinhu zvinoita kuti hama dzaKristu dzigumburwe!—Ruka 17:2.
Unofanira kuona sei munhu anodya chingwa nekunwa waini paChirangaridzo? (Ona ndima 9-11)
10. Ungaratidza sei kuti unoremekedza vaKristu vakazodzwa?
10 Tingaratidza sei kuti tinoremekedza vaya vakazodzwa naJehovha? Hatingadi kuvabvunza kuti vakaziva sei kuti vazodzwa nokuti tinenge tava kupindira muzvinhu zvisinei nesu. (1 VaT. 4:11; 2 VaT. 3:11) Hatifaniri kufunga kuti vabereki vevanhu vakazodzwa, vavakaroorana navo, kana kuti dzimwe hama dzavo dzichazodzwawo. Kuzodzwa hakunei nedzinza remunhu kana kuti waakaroorana naye. (1 VaT. 2:12) Hatifaniri kungobvunza-bvunza madzimai kana kuti varume vevaKristu vakazodzwa kuti vanonzwa sei pavanofunga kuti vachazorarama vasina mumwe wavo muParadhiso panyika pano. Pane kubvunza zvinhu zvingaita kuti munhu arwadziwe, tose zvedu tinogona kuva nechivimbo chizere chekuti Jehovha achagutsa “zvinodiwa nezvinhu zvipenyu zvose.”—Pis. 145:16.
11. Tinozvidzivirira sei kana tikasiyana nekatsika ‘kekungoyemura vanhu’?
11 Kana tisingaoni vaKristu vakazodzwa sevanokosha kupfuura vamwe tinenge tichitozvidzivirirawo. Magwaro anotiudza kuti muungano munogona kuwanikwa “hama dzenhema.” (VaG. 2:4, 5; 1 Joh. 2:19) Vanyengeri ava vanogona kutozviti vakazodzwa. Uyewo vamwe vaKristu vakazodzwa vanogona kupedzisira vatsauka pakutenda. (Mat. 25:10-12; 2 Pet. 2:20, 21) Hatifaniri kuva nekatsika ‘kekungoyemura vanhu’ kana kuti kuvakwidziridza, vangava vakazodzwa, vaKristu vanozivikanwa, kana kuti vaya vava nemakore vachishumira Mwari. Kana vanhu ivavo vakatsauka, isu hatizotsaukiwo asi tinoramba takatendeka kuna Jehovha.—Jud. 16.
TINOFANIRA KUNETSEKA HERE NENHAMBA YEVANODYA PACHIRANGARIDZO?
12, 13. Nei tisingafaniri kunetseka nenhamba yevanodya chingwa nekunwa waini paChirangaridzo?
12 Kwemakumi emakore, nhamba yevanodya paChirangaridzo cherufu rwaKristu yaiderera. Asi mumakore achangopfuura, takaona kuti nhamba iyi iri kuramba ichiwedzera. Tinofanira kunetseka here nekuwedzera uku? Kwete. Ngationei zvimwe zvinhu zvinokosha zvatinofanira kufunga nezvazvo.
13 “Jehovha anoziva vaya vari vake.” (2 Tim. 2:19) Vaya vanoverenga vanhu paChirangaridzo havazivi kuti ndiani chaiye ane tariro yekudenga. Nhamba yevanodya inosanganisira vamwe vanofunga kuti vakazodzwa asi ivo vasina. Pane vamwe vaimbodya chingwa nekunwa waini paChirangaridzo asi vakazorega. Vamwe vanogona kunge vachirwara nepfungwa kana kuti vaine zvimwe zvinhu zviri kuvanetsa, zvokuti vanogona kupedzisira vava kufunga kuti vachanotonga naKristu kudenga. Saka nhamba yevanodya haisiriyo inonyatsoratidza kuti panyika pasara vanhu vangani vakazodzwa.
14. Bhaibheri rinotii nezvenhamba yevakazodzwa vachange vari panyika panguva ichatanga kutambudzika kukuru?
14 Vakazodzwa vachange vachiwanikwa munzvimbo dzakawanda panyika panguva ichauya Jesu kuti avaunganidze kuti vaende kudenga. Richitaura nezvenguva iyoyo, Bhaibheri rinoti nezvaJesu: “Achatuma ngirozi dzake nokurira kukuru kwebhosvo, uye dzichaunganidza vakasarudzwa vake vachibva kumhepo ina, kubvira kumugumo mumwe wematenga kusvikira kune mumwe mugumo wao.” (Mat. 24:31) Bhaibheri rinoratidza kuti mumazuva ekupedzisira panyika pachange pangosara vakazodzwa vashoma. (Zvak. 12:17) Asi haritauri kuti panyika pachange paine vakazodzwa vangani pachatanga kutambudzika kukuru.
15, 16. Ndezvipi zvatinofanira kuziva panyaya yekusarudza kunoita Jehovha vaKristu ve144 000?
15 Jehovha ndiye anosarudza nguva yokuzodza vanhu. (VaR. 8:28-30) Jehovha akatanga kusarudza vakazodzwa pashure pekufa uye kumutswa kwaJesu, uye zvinoita sekuti vese vaiva muungano yechiKristu mumakore iwayo vainge vakazodzwa. Asi kwemazana emakore akazotevera, vakawanda vaizviti vaKristu vaiva vekunyepera. Jesu akavafananidza ‘nemasora.’ Asi munguva yose iyoyo kusvikira pakazotanga mazuva ekupedzisira, Jehovha akaramba achizodza vamwe vanhu vakatendeka, uye vakaratidza kuti vakanga vakafanana ‘negorosi’ rakataurwa naJesu. (Mat. 13:24-30) Mumazuva ano ekupedzisira, Jehovha ari kuramba achisarudza vaKristu ve144 000.  Kana akada kuzosarudza vamwe mugumo wava kutosvika, ndisu vanaani kuti tibvunze kuti azviitirei? (Isa. 45:9; Dhan. 4:35; verenga VaRoma 9:11, 16.)  Tinofanira kungwarira kuti tisaita sevashandi vakanga vasingagutsikani avo vaigunun’una pamusoro pezvakaitwa natenzi wavo kuvaranda vakashanda kweawa rimwe chete.—Verenga Mateu 20:8-15.
16 Havasi vose vane tariro yekuenda kudenga vari muboka ‘remuranda akatendeka, akangwara.’ (Mat. 24:45-47) Sezvavaingoita panguva yevaKristu vekutanga, Jehovha naJesu vachiri kupa vakawanda zvokudya pachishandiswa vanhu vashoma. VaKristu vakazodzwa vashomanana ndivo vakashandiswa kunyora Magwaro echiKristu echiGiriki. Mazuva anowo, vaKristu vakazodzwa vashoma ndivo vakagadzwa kuti ‘vape zvokudya zvekunamata panguva yakakodzera.’
17. Wadzidzei munyaya ino?
17 Tadzidzei munyaya ino? Tadzidza kuti Jehovha akasarudza kupa vanhu mibayiro miviri. Anopa vaJudha vekufananidzira, mubayiro wekurarama kudenga, uye varume gumi vekufananidzira, mubayiro wekurarama panyika. Asi zvaanotarisira kumapoka aya ari maviri zvakafanana. Anoda kuti ose arambe akatendeka uye ateerere mitemo mimwe chete. Mapoka acho ose anofanira kuramba achizvininipisa. Mapoka acho ari maviri anofanira kubatana. Mapoka acho anofanira kuita kuti muungano murambe muine rugare. Mazuva ekupedzisira zvaava kunopera, tose zvedu ngatirambei tichishanda seboka rimwe chete tichitungamirirwa naKristu.
^  (ndima 3) Pisarema 87:5, 6 rinoratidza kuti mazita evanhu vose vachanotonga naJesu kudenga anogona kuzoratidzwa kana kuti kuzoziviswa mune ramangwana.—VaR. 8:19.
^  (ndima 15) Kunyange zvazvo Mabasa 2:33 ichiratidza kuti Jehovha anoshandisa Jesu pakuzodza vaKristu ava nemudzimu mutsvene, iye pachake ndiye anenge avasarudza.
^  (ndima 15) Kuti uwane mamwe mashoko, ona “Mibvunzo Inobva Kuvaverengi” muNharireyomurindi yaMay 1, 2007, mapeji 30-31.
Rudo “Haruzvibati Zvisina Kufanira”
Muapostora Pauro paaitsanangura nezverudo akanyora kuti: “Rudo rune mwoyo murefu uye rune mutsa. Rudo haruna godo, haruzvikudzi, haruzvitutumadzi, haruzvibati zvisina kufanira, haruzvitsvakiri zvarwo, harutsamwi. Haruchengeti mafi.” (1 VaK. 13:4, 5) Mashoko ekuti “haruzvibati zvisina kufanira” akashandurwa kubva pashoko rechiGiriki rinoreva kusaremekedza vamwe, kuita zvisina unhu, kana kuti kuita zvinoshoresa. Kana tichida hama dzedu hatizoiti zvinhu izvi, asi tichafungawo nezvekuti dzinganzwa sei nezvatingataura kana kuti zvatingaita.
Tinogona kuratidza kuti tinoda hama dzedu dziri kutungamirira muungano nemabatiro atinodziita. Dzimwe nguva vaKristu vanozivikanwa vanogona kuuya kugungano kana kuti kune imwe purogiramu yezvekunamata yatinenge taendawo. Vanhu ava vanogona kunge vari vatariri vematunhu, hama dzekuBheteri, dzeDare reBazi, uye dzeDare Rinotungamirira nevanodzibatsira. Zvagara zviri muropa kuti tinenge tichida kuratidza ruremekedzo kuhama idzi nemadzimai adzo. Hapana anoda kutevedzera unhu hwakaipa hwaiva naDhiyotrefesi. Akaramba kugamuchira hama neruremekedzo. (3 Joh. 9, 10) Asi zvingaitika here kuti tifarire vanhu ava zvakanyanyisa zvokuti tinopedzisira taita zvisina unhu? Zvinhu zvakadaro zvingaitika sei?
Tinofara chaizvo patinowana mukana wekuonana uye kumbotaura nehama dzinenge dzatishanyira nemadzimai adzo, asi kana tikavabata sezvinoitwa vanhu vane mukurumbira munyika tinenge tisiri kuvaremekedza. Somuenzaniso tingati tiri kuvaremekedza here kana tikavatora mapikicha tisina kuvakumbira pavanenge vachidya kana kuti pavanenge vachiita zvimwe zvinhu? Tingavakumbira kuti vasaine mabhuku kana kuti maBhaibheri edu here? Tingasundidzira vamwe kuti titorwe mapikicha nehama idzi here? Maitiro akadaro haaratidzi kuti tinoda hama dzedu. Asi anotoratidza kuti hatisi kukoshesa kushanda nesimba kwadzinoita kuti dzitibatsire uye kutishanyira kwadzinenge dzaita. Vaya vanenge vatanga kuuya kugungano musi iwoyo vanofungei vakaona maitiro akadaro?
Chii chichatibatsira kuti tizive mabatiro atinofanira kuita hama dzedu? Kutanga, ngatiyeukei kuti Jehovha ndiye watinofanira kurumbidza nekukudza. (Zvak. 4:11) Chechipiri, ngatizivei kuti kunyange zvazvo tichifanira kuremekedza hama idzi, hatifaniri kuzoita setava kudzinamata. Hama idzodzo nemadzimai adzo dzinoda kubatwa sehama dzedu nehanzvadzi, kwete sevanhu vane mukurumbira munyika. (Mat. 23:8) Chechitatu, ngatiyeukei zvatakadzidziswa naJesu paakati: “Naizvozvo, zvinhu zvose zvamunoda kuti vanhu vakuitirei, vaitireiwo saizvozvo.” (Mat. 7:12) Kana tikaramba tichiyeuka izvi, tichakwanisa kuratidza rudo ‘rusingazvibati zvisina kufanira.’